Miharihary ny fahasimbana kanefa tsy mbola vita fandraisana ara-teknika sy notokanana akory. Ahitana an’izany ny mihazo an’i Soanierana sy Ankadimbahoaka, raha avy any Anosy iny. Tena ireny ve ny kalitao nifanarahana sa nisy ny tsirambina nataon’ny orinasa nahazo ny tsenam-baro-panjakana ? Raha izay dia matimatin’ny mora izany isika, ka asa mifandraika amin’ny vola naloa no sitrahana, hany ka volana vitsy monja taorian’ny fahavitany, dia efa feno lavaka ny arabe. Raha ny mifanohitra amin’izay kosa dia zon’ny fanjakana tsara ny manasazy ilay orinasa noho ny kalitao satria nisy rahateo ny fanamby natao fa maharitra 30 taona io làlana io, saingy tsy izay ny zava-misy. Volam-panjakana, hetra avy amin’ny Malagasy no nanamboarana an’ireny. Maro ireo lalana am-polony taona maro no nahavitany, saingy mbola tsara sy tsy misy fahasimbana firy kanefa ireo vao natao tsy ampy herintaona akory, dia efa manomboka ahitana fahapotehana sahady.